Buurmadow "Oday Muuse Biixi maalmihii dhowayd Ee uu doorashada qabtay.." - Wargane News
Home Somali News Buurmadow “Oday Muuse Biixi maalmihii dhowayd Ee uu doorashada qabtay..”
Buurmadow “Oday Muuse Biixi maalmihii dhowayd Ee uu doorashada qabtay..”
W/Q Boqor Buurmadow
Xigmad soomaaliyeed Baa waxay tidhaahdaa Waxaa la yidhi. Reer hebel waxaa u dhashay Wan sucdi ah Oo garabka ilaa jeeniga madow Oday wax garad ah dadka aad u kala yaqaan Baa yidhi bah hebla nasiibkeedaan aqaanoo Madawga jeeniga wanku cugufta kuma sina Sidaas baanu u ahayn wanka dhashay sucdi Oo macnihiisu yahay maaha mid amran Ama barakaysan
Haatan Oday Muuse Biixi maalmihii dhowayd Ee uu doorashada qabtay isku sidkan iyo Markuu uu aqbalay rabitaankii shacbiga Ee Cabdikariin Axmed Mooge iyo sidii Uu uga gaabsaday Doorashadii maayarrada Gobolada dadku aad bay ugu riyaaqaan.
Xataa kuwii nebcaa waxaana looqaatay Odaygu inuu. Udiyasrgaroobayo inuu Dalkan kaga tago taariikh dhaxal gal ah Anigu waxaan lahaa marwalba Bahal caydhin madaayo Nina caadii ma baajo.
Alleylehe waa laysoo noqday marhaduu Kubilaabay ama uu ku balaysimay baarlamankii Aynu uhan waynayn. Laaluush iyo ku tagrifal Hantidii umada oo qaarkooda loo iibsanaaayo Sidii wanankii saylada Hargaysa Madaxwaynayaashii ka horeeyey waxay xilka ka degeen iyagoo. Loo ducaynaayo Isagana waxaynu ugu ducaynaynaa Inu sharaf kaga tago sidii ragii kahoreeyey
Mase quruxbadna toobiyaha uu kusocdaa
Somaliland: “Qabyaaladdii Maanta Ayeynu Kafantii U Xidhnay” Murrashaxa Madaxweyne Ku-xigeenka Xisbiga WADDANI